Chili: Mbola velona ireo mpitrandraka 33 tafahitsoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2010 21:38 GMT
Salama tsara izahay 33 ato amin'ny fialofana
Ireo no teny nanamafy fa mbola velona ireo mpitrandraka 33 voahidy nandritra ny 17 andro tao anaty fitrandrahana volamena sy varahina mena tany akaikin'ny tanànan'i Copiapó. Nosoratana tamin'ny ranomainty mena tamina taratasy kely tao anatina harona plastika ilay hafatra [es]. Ilay harona dia nifatotra teo amin'ny faran'ny fitaovana vy fampiasa handehanana any amin'ny fialofana any am-paran'ny fitrandrahana, izay eritreretin'ireo injeniera fa mety hisy ireo mpitrandraka tsy tafavoaka.
Na dia tamin'ny vao mangirandratsy aza no nampandrenesan'ireo mpamonjy voina ireo fianakavian'ireo mpitrandraka momba ilay hafatra[es], tamin'ny 4ora hariva tany an-toerana kosa ny governemanta vao nanamafy ny vaovao. Teo ivelan'ny fitrandrahana no namoahan'ny Filoha Sebastian Piñera ny vaovao, araka ny hita ato amin'ity horonantsary manaraka ity, izay niteraka fanehoan-kafaliana avy hatrany teny an'araben'ireo tanàna maro, ary nitondra fanamaivanana be ho an'ireo fianakaviana sy ireo Siliana manerana ny firenena.
Horonantsary avy amin'ny mpampiasa YouTube dvary13, nalaina avy teo ivelan'ny fitrandrahana San Jose tamin'ny 22 Aogositra 2010.
Jinny, mpanoratra ilay blaogy The Jinny Show [es], dia naneho hafaliana tamin'ny vaovao tsara:
17 andro! Mahazo vaovao avy amin'ireo mpitrandraka ihany isika ny farany!! ela izay!!! VELONA DAHOLO! ireo 33!, tsara izany =) tsy mampino! nahita tamin'ny vaovao tamin'ny maraina fa ny fialofana nisy azy ireo dia tsy nanana sakafo afa-tsy ho an'ny 48ora!!! ary ho an'ny isana mpitrandraka voafetra ihany! tsy maintsy miaiky ny hery sy ny fahafahan'izy ireo mifandamina isika fa tsy maintsy namelo-tena toy izany ry zareo =) izao isika tsy maintsy miandry efa-bolana hoy izy ireo :S mba hamoahana azy ireo fotsiny.
Enina andro talohan'io, noterena ireo mpamonjy voina hampiato ireo asa tao anatin'ny fitrandrahana sy tao anatin'ny lava-drivotra [es] satria nolazaina fa tsy mafy orina mihitsy ireo. Noraisina izany fanapahan-kevitra izany mba hanohizana ny fikarohana amin'ny alalan'ireo fandavahana ihany, mba handavahana lavaka tery handefasana vatsy ilain'ireo mpitrandraka.
Nahavery fanantenana ireo Siliana maro ny nanafoanana ny fanavotana maika. Ny blaogy Orgullo Eterno [es] dia naneho hevitra momba ireo fanantenana izay efa maty teo aloha:
Fito ambin'ny folo andro no lasa hatramin'ny nahafantarana fa tafahitsoka any ambany tany any avaratr'i Shili ireo mpitrandraka… Tsy very mihitsy ny finoana. Izaho manokana aloha tsy mbola niteny hoe “maty ry zareo” , “Tsia, tsy misy na inona na inona azo atao intsony”. Mpitrandraka anie ry zareo e! Eny an-tànany no hitondràny ezaka, faharetana, ary fahendrena maro be rehefa momba ny asa sy ny tanin-dry zareo izany.
Fianakavian'ireo mpitrandraka teo amin'ny havoana akaikin'ny fidirana ao amin'ny fitrandrahana San José. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr AlexCamPro, ampiasaina eo ambany fiarovan'ny Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0.
Nisy tao amin'ny Twitter ihany koa ireo adihevitra momba ny trangan'iny andro iny miaraka amin'ny tenifototra #mineros, nahatonga izany ho resaka malaza maneran-tany. Naneho tsotra izao ny hafaliany ho an'ireo mpitrandraka [es] i Daniela Ramirez (@DanielaRamirezA), tahaka an'i Juan Pablo Soto [es] (@jpsoto):
Faly aho, na dia tsy manamaivana ny asa mbola miandry aza. Ny tena nahatohina ahy dia ilay hafatra mazava tsara sy mahomby. Tairo ry mpitrandraka a!
Ankoatra ny hafaliana dia maro koa ireo naneho ny fahasosorany noho ny governemantan'i Sebastian Piñera tsy nampandre mialoha ireo fianakavian'ireo mpitrandraka momba ilay hafatra nifatotra tamin'ilay fandavahana. Siliana tahaka izany Ign. Rodríguez (@micronauta) [es]:
…amiko ny endriky ny Siliana iray misandoka anarana sy manao fanararaotana ara-barotra amin'ny voina nahazo ireo mpitrandraka dia mitovy [endrika] amin'izay mampihemotra ny vaovao mba hanomezana izany izy mihitsy.
Eo anoloan'izany indray, i Eduardo Zuniga (@eduardoz) dia mitsipaka izany fomba fijery izany ary maneho ny fanohanany [es] ny fomba fanaon'ny governemanta tamin'ny fikarohana sy ireo ezaka fanavotana:
Marobe ireo olona tsy mahatakatra ny fahombiazana sy ny fanokanana asa nataon'ny governemanta ho an'ireo mpitrandraka manokana, aoka izay ny hajambàna, asa mahafinaritra iny.
Ireo hafa indray maminavina izay ho tohiny raha vao afaka ny loza. Niteny [es] i Juan Pablo Ayala (@jampaloide) :
Manantena aho fa hisy fotoana fieritreretana manaraka ireo vaovao tsara momba ireo mpitrandraka. Tsy tokony hanararaotra toa izao ireo orinasa!
Roberto Arancibia, mpanoratra ny El Mundo Sigue Ahí (The World is Still There) [es], dia nanoratra:
Firenena iray manontolo no gaga tamin'ny tanjak'ireo mpitrandraka 33 tafahitsoka. Raha hanampy ny filaminan-tsaina na fiarovana ireo mpitrandraka hafa izany, dia raisina an-tànan-droa ireo fepetra vaovao, toy izany koa ny fanamafisana ireo fizahàna mba hampahahentitra kokoa ireo fepetra ireo […] Nandritra ireny andro ireny aho nieritreritra momba ireo fianakaviana 33, mpifankatia, sipa, zanaka vavy, reny. Tsy rariny izany. Tena tsy rariny mihitsy ny zavatra niainan'izy ireo.
Nitosatosaka tamin'ny aterineto ny fanehoana fanohanana ireo mpitrandraka, ny fianakaviany, ary ireo mpamonjy voina. Nanaparitaka ity sary ity manerana izao tontolo izao ireo mpampiasa Twitter mba hanehoan-dry zareo ny fanohanany:
"Indro misy fanomezana avy amin'ireo (Siliana) 16 tapitrisa. Mba hiharetanareo mandra-pahatonganay." Asan'i Alberto Montt, voaaro ambany Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0.